Ngokulawulwa okutsha kwe-Covid-19 e-China, iifektri ezininzi ziphinde zavula kwaye zaqala ukuvelisa kwakhona ngokulandelelana. Abanye babathengi bethu bazama konke okusemandleni abo ukuqhuba ishishini, bade basebenze ekhaya. Kuyinto elungileyo kumntu wonke, sonke siyakholelwa ukuba izinto ziya kuba ngcono ekugqibeleni.
Ukuqinisekisa ukuba imveliso iyahamba njengesicwangciso kunye nokukhathalela impilo yabasebenzi ngaxeshanye, sithatha iindlela ezininzi njengokunxiba imask, kunye nokugcina umgama weenyawo ezi-8 kunye, ukuhlamba izandla ngangokunokwenzeka. Ukongeza, ngexesha, abathengi abaninzi abakwazanga ukwenza uhlolo njengangaphambili, sisombulula ingxaki ngokuthumela ividiyo kunye nengxelo yemifanekiso kubathengi, abanesicelo. Kwaye siya kuthumela zonke iinkcukacha zeempahla, ukupakisha, indawo yenxalenye kunye nenkqubo ethile yokuvelisa, emva koko ukufumana imvume ngaphambi kokulayisha. Ulwaneliseko lomthengi lufanele ukwenza kwethu.
Umphathi wethu ngokubanzi, hlawula ingqalelo enkulu kunye nomvuzo kubasebenzi bethu, ukuthenga izinto ezikhuselayo ezingakumbi, njl njl njl. Kwanangoku lixesha elinzima, sonke siziva sinesibindi ngeli xesha, kuba sonke siyamanyana ukudibana nobunzima. Kholwa kuyo yonke imizamo yethu, ngomso iya kuba likamva eliqaqambileyo.
Ukuqinisekisa umgangatho wemveliso, samkela eyona mfuneko ingqongqo kunesiqhelo. Njengoko kungekho ndlela yokucwangcisa uhlolo kwindawo efana nexesha elidlulileyo, simeme umthengi kwinkomfa yevidiyo ukuba ahlole zonke iinkcukacha zemveliso, sathumela ingxelo yokuhlola emva koko. Kubaxumi bethu abaxabisekileyo, sihlangabezana nexesha elinzima kakhulu. Ubusuku buzophela kwaye imini iyeza. Zive ukhululekile ukutyelela iwebhusayithi yethu, okanye usithumelele i-imeyile ukuze ufumane iodolo.